မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း - မျက်လုံးစာမေးပွဲ | APK ကို Android အတွက် Download
ပင်မစာမျက်နှာ » ကျန်းမာရေး & Fitness Apps ကပ » မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း - မျက်လုံးစာမေးပွဲ
မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်း - မျက်လုံးစာမေးပွဲ APK ကို
ဘုံမျက်စိပြဿနာများအတွက် Check အနီးတူသောသို့မဟုတ် farsightedness နှင့်သင့်ကိုယ်ပိုင်အိမ်ရဲ့နှစ်သိမ့်အတွက်အများကြီးပို။ မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်းဖြင့်သင်၏မျက်စိကျန်းမာရေးကိုသင့်ရဲ့ကိုယ်ပိုင်လက်၌စာသားဖြစ်ပါတယ်။ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့၏ပြည့်စုံသောမျက်စိစာမေးပွဲဖြေဆိုယူပါ နှင့် Play Store မှာနံပါတ်တစ်အမြင်အာရုံ app ကိုနှင့်အတူ၎င်းတို့၏ရူပါရုံကိုပြတဲ့သူထက်ပိုမို2လူဦးရေသန်း join!
အခမဲ့နဲ့ရိုးရိုးဘယ်နေရာမှာမဆိုသင့်ရဲ့ရူပါရုံကိုပြမှစမ်းသပ်မှုသုံးစွဲဖို့, အချိန်မရွေး။ သင့်ရဲ့မျက်စိခြေရာခံသိမ်းဆည်းထားပါနှင့်သင်သည်သင်၏မျက်စိကျန်းမာရေးထိပ်ပေါ်မှာအမြဲနေအာမခံပါသည်။ မျက်စိစောင့်ရှောက်မှုကျွမ်းကျင်သူများ၏အကူအညီဖြင့်ဖွံ့ဖြိုးပြီး, ဤစမ်းသပ်မှုသည်မျက်လုံးပညာရပ်ဆိုင်ရာအတွက်အများဆုံးသက်သေပြနည်းစနစ်အပေါ်အခြေခံထားတယ်။ ကဲ့သို့သောအသုံးအများဆုံးရူပါရုံကိုပြဿနာများ၏အချို့အဘို့မျက်စိစမ်းသပ်စစ်ဆေးမှုများ:
• nearsightedness, farsightedness နှင့် astigmatism တူသောအမှားအယွင်းများ။ ဤရွေ့ကားရူပါရုံကိုစမ်းသပ်မှုစံဇယား (Snellen ဇယား, LogMAR ဇယား, Golovin-Sivtsev စားပွဲ, Landolt ကို C / ဂျပန် Vision ၏စမ်းသပ်မှု, လိမ့်ကျခြင်း, E ဇယား) အပေါ်အခြေခံထားတယ်
• macular ယိုယွင်း
• 12 မျက်စိစမ်းသပ်မှုရူပါရုံကိုတိုးတက်မှုကိုခြေရာခံရန်
• 8 မျက်စိကျန်းမာရေးဉာဏ်စမ်းပဟေဠိအသုံးအများဆုံးရူပါရုံကိုပြဿနာတွေပေါ်တွင်သင်၏အသိပညာစစ်ဆေး
- သတင်းကောင်း! မျက်လုံးစာမေးပွဲပိုကောင်းဖျော်ဖြေဖို့ - သငျတို့ကအစီရင်ခံတင်ပြသင့်ရဲ့တုံ့ပြန်ချက်များနှင့်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကိစ္စရပ်များအပေါ် အခြေခံ. ကျနော်တို့မျက်စိစမ်းသပ်ခြင်းတိုးမြှင့်ပြီတကား
- ငါတို့သည်လည်းအထွေထွေ bug တွေ fixed နှင့်တိုးတက်မှုများပြီ။
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ app ကို install လုပ်ပြီးမကြာမီလာမယ့် features အသစ်အဘို့အညှိနေဖို့!
7.77 ကို MB
မိုက်မဲစမ်းသပ်ခြင်း - ဘယ်လို ...